यिन हुन् आइफोन सेभेनका विशेषताहरु
अमेरिकी कम्पनी एप्पलले बहुप्रतिक्षीत आइफोन सेभेन र सेभेन प्लस सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भब्य समारोह आयोजना गरिएको थियो । दुबै आइफोनको प्रि अर्डस सेप्टेम्बर ९ देखि सुरु हुनेछ भने वितरण सेप्टेम्बर १६ तारिखबाट हुने एप्पलले जनाएको छ । ३२ जिबीको आइफोन सेभेनको मूल्य ६४९ डलर र त्यति नै जिबीको सेभेन प्लसको मूल्य ...
अब डिलिट भएको फोटो पुनः प्राप्त गर्न सकिने
हालै मेरो एउटा साथीको एन्ड्रोइड फोनबाट केही फोटोहरु गल्तीले डिलिट भएछन् । अनि ती फोटो पुनः प्राप्त गर्ने कुनै तरिका छ कि भनेर उसले मलाई मेल गरेको थियो । यसको लागि उपायहरु धेरै छन् । तर कुनै उपायले काम गर्छन् त कुनैले समय मात्र खेर फाल्छन् । यस्तो समस्या जसलाई पनि पर्न सक्छ । कुनै ...
यो सत्य थियो त् ?
bज्ञान प्रवृतिमा भएको गुणात्मक विकाससँगै आज संसार गाउँमा परिणत भएको छ । अझ मानव सभ्यतालाई सहज बनाउन बैज्ञानिकहरु थप अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन् । यसैविच युरोपियन स्पेस एजेन्सीले एक नयाँ परिक्षण शुरु गरेका छन् । उक्त बैज्ञानिकहरुको टिमले ‘लिजा पाथफाइडर’ अन्तरिक्षमा पठाएका छन् । उनीको मुख्य उदेश्य आइन्टाइनले भनेको गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तमाथि केन्द्रित रहेको समाचार एजेन्सीहरुले बताएका छन् ...
जबर्जस्ती बन्द गराउँदै हिँडेका ७५ जना पक्राउ
८ साउन, काठमाडौँ । जबर्जस्ती बन्द तथा तोडफोड गर्दै हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीका ७५ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा तोडफोड गर्दै उपत्यकामा जबर्जस्ती बन्द गराउँदै हिँडेका ७४ जना बन्दकर्तालाई काठमाडौँबाट र एकजनालाई ललितपुरबाट शुक्रबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ । बोतल र जर्किनमा पेट्रोल बोकेका ती बन्दकर्तालाई पक्राउ गरिएको ...
पाँचबुँदे माग पुरा नभए आन्दोलन थाल्ने डा. गोविन्द केसीको चेतावनी
८ साउन, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सहमति कार्यान्वयनसहित पाँच बुँदे माग राख्दै सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए आमरण अनसनसहितका आन्दोलन थाल्ने केसीले चेतावनी दिएका छन् । केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको केसीको ...
पोखरामा पहिलो पटक क्लबस्तरीय लिग क्रिकेट हुने
पोखरा । पोखरामा पहिलो पटक क्लबस्तरीय लिग क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ । माछापुच्छ्रे क्रिकेट क्लब पोखराको आयोजनामा साउन १६ गतेदेखि पश्चिमाञ्चलका क्लवहरुबीच हुने खेल ४ महिना सम्म चल्ने छ । ८ टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिता हप्तामा एउटा मात्रै खेलाइने छ । प्रत्येक शनिबार नगर प्रशिक्षण केन्द्र नदीपुरमा खेलाइने खेल राउण्ड रोविनको आधारमा खेलाइने छ ...
विप्लव माओवादीको बन्दले उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित
८ साउन, काठमाडौ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले गरेको नेपाल बन्दका कारण शुक्रबार विहानैदेखि राजधानी लगायतको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण प्रहरीले काठमाडौ उपत्यकामा प्रहरीले सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको छ । प्रहरीले विहानैदेखि जर्बजस्ती यातायात बन्द गराउँदै हिड्ने विप्लव माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ । बन्द गराउँदै हिड्ने ...
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रुपान्तरणको खाँचाे
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया शुरु भएको समयावधि करिब छ दशक भैसकेको छ । यस अवधिमा बाह्रवटा आवधिक योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न भैसकेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रयासकै सन्दर्भमा अभ्यास गरिएका अन्य योजनाहरूमा विषयगत र क्षेत्रगत योजना पनि पर्दछन् । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन किसिमका योजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएकै छन् । यिनै योजनाको आधारमा वार्षिक नीति, योजना, ...
आमा :विपना श्रेष्ठ
तिमी छौँ र त हिम्मत छ !! तिमी छौँ र त किस्मत छ !! सबै तिमीबाटै पाएकोछु तिमी छौँ र त जगत छ !! तिमी छौँ र त धड्कन...
महाबीरमाथि मुकुन्दे यसरी खनिए : भन्छन अमेरिका भाग्न लागेका विदेशीहरुलाइ महादान नदेउ !
मेरो पिता महान हुनुहुन्छ :सुमी पौडेल
माओबादीहरुले सोचौ जनयुद्द कि पृथ्वीनारायण शाह ? सुशान्त लामा
बैंकहरूले ठग्लान होस् गर्नुस :अमृत वाइवा तामांग
तिमी छौँ र त हिम्मत छ !! तिमी छौँ र त किस्मत छ !! सबै तिमीबाटै पाएकोछु तिमी छौँ र त जगत छ !!...
ओली सुवास चन्द्र बोश होंइनन :अमृत वाइवा तामांग
ओलीको प्रश्न- बृद्ध भत्ता बैंशमै खाने हो रे ? हाम्रो संस्कार र व्यबहार अनि प्रबृत्ति राम्रो कामलाई पनि बिरोध गर्नु हो त्यसैले त हिटलरले...
अखिल(क्रान्तिकारी) को राष्ट्रिय सम्मेलन फागुनमा हुने
असल छोरी,बनेर देखाउनु छ: साबित्रा उमारा
सबु धिमालको मुक्तक
अ हो लक्ष्य मेरो उद्देश्य पुरा,गरेर देखाउनु छ एउटा उदाहरणिय चेली,भएर देखाउनु छ मैले धोकेवाज पितासँग बदला लिएर हैन म त एउटी असल छोरी,बनेर...
नाङ्गो शरीर नमज्जा लाग्छ :नेपाल आमाकी छोरी
गाउबाट एउटा युवती सरकारलाइ यसरी हेर्छिन
मन्दिर पसेर भगवान भयाे पत्थर©कुन्साङ